ITheku lishaya izaququ eziyiqhingasu kolwamatekisi – Bayede News
ITheku lishaya izaququ eziyiqhingasu kolwamatekisi
Emveni kwamasonto amathathu kuvele izindaba zenkampani
Inhloko yezokuthutha kuMasipala uMnu uThami Manyathi ekhombisa uhlelo iGo!Durban olunokukhuluma
Emveni kwamasonto amathathu kuvele izindaba zenkampani okuthiwa imele imboni yamatekisi nokuyinto ephikwe ngososesheni abathintekayo, ikhonco kukho konke lokhu kukhuluma okunguMasipala iTheku liyaqhubeka nokushaya izaququ.
Lokhu ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi yingxenye yeqhingasu loku‘bhuntshisa’ udaba nokuzothi kungaba njalo bese kuqhutshwa umkhankaso wezokuxhumana wokulungisa isithombe saloluhlelo kanye nolweGo!Durban.
Obekushaqisa kulolu daba wukuthi inkampani i-Ethekwini Metro Taxi Council Investment Company (Pty) Ltd iphakanyiswe zikhulu zikaMasipala ukuthi iphathe umsebenzi wezigidi zamarandi bungekho ubufakazi bomsebenzi eke yawenza.
Okunye okwaba yisizathu wukuthi imele imboni nokwahamba kwahamba kwavela ukuthi abanye embonini abazi nokuthi isikhona le nkampani. ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi ikhona ibhalisiwe ngezinombolo ezithi-2015/264860/07, futhi inabaqondisi abahlanu abazimele.
Le nkampani yanconywa nguMasipala ukuthi ithole lethenda iminyaka emithathu ngesamba esiyizi-R27 650 700.00. Phakathi kwezinto okumele ukuba izenze eminyakeni emithathu yilena elandelayo:
Ukuhlela ngokusemthethweni imboni yamatekisi okubandakanya okulandelayo:
Ukwakha kabusha imboni yamatekisi ukuze kube khona izinkampani ezingezezifunda nezikasosesheni.
Ukuqoqwa kwemininingwane yokusebenza ukuze kwakhiwe imiqulu yokusungulwa kwenkampani, izinhlaka zomsebenzi kanye nokuhambisana nokuqeqeshelwa umsebenzi.
Ukugqugquzela ukuzibandakanya kwabanikazi bamatekisi abathunywa yimisebenzi yedolobha edinga ukuzibandakanya kwemboni yabamatekisi.
Sesingakuqinisekisa ukuthi uMkhandlu ‘uthule nje uyasebenza’ ukuhlelembela umkhankaso wezokuxhumana. Ukhuluma naleli phephandaba umthombo osendelene nodaba uveze ukuthi ukuphuma kodaba akubahlalisanga kahle abanye ngaphakathi kuMasipala nasembonini.
“Cha khona nenza obekungalindelekile. Njengoba sabe sesigijinyiswa ngemibuzo, abathintekayo befuna ukwazi ukuthi udaba lolu lusho ukuthini ezinhlelweni ezikhona. Abanye ababhalwe odabeni abasazi nesiZulu kwamele sichaze ukuthi kuthiwani. Nokho okwakumqoka kakhulu wulaka lwabamatekisi ikakhulukazi ezindaweni ezithintekayo,” kusho umthombo.
Uqhube wathi: “Lwanede lwaphuma lolu daba kwamele sibe nohlelo lwezokuxhumana lokuziphungela. Kwaqale kwanokuvumelana ukuthi iphephandaba lenu njengoba lingesiZulu nje ngeke abafundi balulandele udaba. Okunye kwaba wukuthi uma singaniphenduli ngeke luqhubeke. Simangele uma ngesonto elilandelayo seniqhubeka nokwenza kwashintsha ukukhuluma,” kusho umthombo.
Okushiwo ngumthombo kubukeka kufakazelwa yisenzo esingejwayelekile sokhulumela uMasipala, uMnu uMusawakhe Mayisela nosekuphele amasonto amathathu engabuyi nezimpendulo mayelana nohlu lwemibuzo ayithunyelelwa yileli phephandaba. Emibuzweni anikwa yona inhloso kwabe kuwukuveza uhlangothi loMkhandlu kulolu daba olubucayi.
Amasonto elandelana uMayisela uphindise elaboHlanga emuva kokufunga ukuthi nakanjani uyabuya nezimpendulo. Nakuleli sonto wenze okufanayo. Phakathi kwezaba abezibeka uMayisela wukuxakwa yimihlangano.
-Uhlu lwemibuzo oluthunyelelwe kuMayisela emasontweni belumi kanje:
-Iyiphi indlela ebeniyisebenzisa ngqo ukunikeza inkampani engakaze isebenze umthwalo onjena?
-Ninaso isiqiniseko sokuthi leyo nkampani inawo amandla okwenza umsebenzi?
-Ngabe ubuholi be-EMTC Investment bunawo amandla njengabantu bebodwana noma beyame kososesheni babo?
-Ngabe indlela yokulawula nokubheka umsebenzi yenziwe ukuze niqaphe okwenzakalayo enkampanini?
-Yiziphi izinto enicabanga ukuthi nizobe senizizuzile ekupheleni kwenkontileka ehlongozwayo?
Nizivumele nina ukuthi eminyakeni eyisithupha aniphathekanga kahle ngabeluleki bangaphandle. Manje ninasiqiniseko sini ngenkampani engenalwazi, ngabe yona ayizokuniphoxa yini njengabanye?
Nokuthi imalini esichithwe nguMasipala weTheku ngohlelo lweGo!Durban kusukela lolu hlelo lweGo!Durban lwethulwa ngowezi-2014?